एजेन्सी– रियल म्याड्रिडमा यसै सिजन भित्रिएका प्रशिक्षक जुलेन लोपेटेगुई हाल निकै दबाबमा छन् । ३३ वर्षयता रियलले कुनै गोल नगरी लगातार चार खेल खेलेको यो तेस्रो पटक मात्र हो ।
जुलेनले यसबिचमा धेरै रणनीति अपनाएपनि कुनै सफलता हात पार्न सकेका छैनन् । अहिले रियल म्याड्रिडको समय उनको पक्षमा छैन । अनुकुल नतिजा हात पार्न नसके उनी हटसिटबाट बाहिर निस्कने छन् । रियल म्याड्रिड यस सिजन असफल हुनुका तीन कारण ।
१. कुशल गोलकर्ताको कमी
पछिल्लो सिजनमा करीम बेन्जेमाले लिगमा मात्र पाँच गोल गरेका थिए । तर, यस पटक जब उनको आवश्यकता भयो उनी आफ्नो लक्ष्य खोज्नमा असफल भएका छन् । मारियानो रियलको बोझ कम गर्न रियल पुगे । तर, उनी टोलीका लागि एक विकल्पको रुपमा प्रभाव पार्न असफल भए । रियल सधै आफ्नो पूर्वस्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको गोललाई धन्याबाद दिने तरिका जान्दथ्यो । क्लबसँग रहँदा उनले गरको गोलसंख्या आफै बोल्छ । तर, रियलका लागि उत्कृष्ट हुँदाहुँदै उनी यस सिजन युभेन्ट्स पुगे । यस सिजन गोल गर्ने भार करिम बेन्जेमा र मारियानोसँगइ ग्यारेथ बेलमाथि छ ।
२. घाइते खेलाडी
रियल म्याड्रिडका मुख्य खेलाडी इस्को र मार्सेलोलाई चोट लाग्नु नै रियलको प्रमुख घाटा हो । जसले गर्दा रियलले यस सिजनको लय कायम गर्ने सकेको छैन् । यी दुई खेलाडीले मैदानमा आफ्नो ड्रिब्लिङ र रचनात्मक खेल प्रदर्शनले विपक्षी टोलीको रक्षात्मक रणनीति महत्वपुर्ण भुमिका खेल्दथे । चोटको सुचिमा ग्यारेथ बेल र डानी कर्भाजल पनि छन् ।
करिम बेन्जेमा पछिल्लो साता अलाभेसविरुद्धको खेलमा चोटग्रस्त भएका थिए । उक्त चोटको स्वरुप अनुसार उनी कम्तिमा दुई हप्ता मैदान बाहिर बस्न सक्ने छन् । रियल मड्रिडले आफ्नो कमजोरी सुधार्दै उचित खेलाडी अनुबन्धन गर्न कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ ।
३.मिडफिल्डमा खस्केको प्रदर्शन
नयाँ रियल मड्रिड प्रशिक्षकसँग जति समस्या छन् त्यसका लागि पर्याप्त समय छैन । एल क्लसिकोको नजिकिंदै गर्दा उनको भविष्यको फैसला पनि छिट्टै नै हुनेछ । उनले अब जिनेदिन जिदानपछि उनलाई किन छनोट गरियो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
लुका मोड्रिच, टोनी क्रुस र क्यासेमिरोको जोडीले यस सिजन लय गुमाएका छन् । पछिल्लो सिजन रियलको सफलताका लागि यी तीनको प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण रहेको थियो । लगातार गल्ति दोहोर्याउने र रणनीतिमा नखेल्ने समस्या सुल्झाएर अगाडी बढे जुलेनको जागिर बच्ने सम्भावना बलियो छ ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज २६, २०७५०८:४८
फिफा बर्षका उत्कृष्ट प्रशिक्षकको मनोनयन सार्वजनिक !
क्रिकेटमा इतिहास रच्न नेपाली खेलाडीको प्रयास जारी , कप्तान खड्का ३९ रनमा खेल्दै !